हामीलाई रोग किन लाग्छ ? यस्ता छन् बच्ने उपचार बिधि (भिडीयोसहित) - ज्ञानविज्ञान
रोग किन लाग्छ ? यसको जवाफ सजिलै दिन सकिन्छ कि खानपान वा दिनचार्यमा गढबढका कारण रोग लाग्छ । प्राय: मानिसहरु रोग लागे पनि कसरी लाग्यो भन्ने कुरामा त्यति ध्यान दिदैनन् । यसैको कारण मानिसहरु पुन: सोही रोगबाट ग्रसित भइरहेका हुन्छन् ।
हामी दिनदिनै रोगी हुँदैछौं । रोगी कसको कारणले हुँदैछौ ? जवाफ हो, आफ्नै कारणले । खासगरी हाम्रो त्यस्ता आनीबानी, जसले हामीलाई रोगी बनाउँछ । सामान्यरुपमा भन्ने हो भने हाम्रो दैनिक खानपान तथा जीवनशैलीको कारणले नै हामी रोगबाट संक्रमित हुन्छौँ ।
स्वस्थ रहन तथा रोग लाग्न नदिनका लागि केहि उपायहरु दैनिक जीवनमा लागू गर्नु पर्छ । हामीले त्यस्ता केहि बानीहरु यहाँ सूचिकृत गरेका छौँ ।
अक्सर हामी खान हतारिन्छौं । सोचाई के छ भने, खाना खाँदा धेरै समय खर्च गर्नु हुँदैन । यो समयको वर्वादी हो । जबकी हाम्रो जीवनको उर्जा, शक्ति, ताकत भनेकै खानाबाट मिल्ने हो । खाना खाँदा एकदम आरामपूर्वक खानुपर्छ । पटक्कै हतार नगरी । प्रशन्न, खुसी, आनन्दित भएर । खाना खुब चपाएर खानुपर्छ । हरेक गाँसमा स्वाद लिनुपर्छ ।
बिस्तारै खाँदा जिब्रोको र्यालग्रन्थीबाट प्रशस्त र्याल निस्किन्छ । यसले खानाको पाचन हाम्रो जिब्रोबाट नै सुरु हुन्छ । जिब्रोबाट नै खाना पच्न सुरु भएपछि यसले हाम्रो पेटमा दबाब कम पर्छ । बिस्तारै खाना खाएमा ग्यास्ट्रिक, गब्जियत लगायतका पेटका रोगहरु लाग्ने सम्भावना असाध्यै कम हुन्छ ।
पानी पिउँने तरिका र मात्राको बारेमा थाहा पाऔँ र लागू गरौँ
शिशुको शरिरमा ७५ देखि ७८ प्रतिशतसम्म पानी हुन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा शरिरमा पानीको मात्रा कम हुदै जान्छ । वयस्क मानिसको शरिरमा ६० प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा हुन्छ । कुनै कारणले हाम्रो शरिरमा पानीको मात्रा कम भए हाम्रो शरिरको सन्तुलन बिग्रिन्छ र शरिरमा रोग लाग्छन् । यसैले शरिरमा पानीको मात्रा सन्तुलित हुनु पर्छ ।
पानी पिउँदा केहि कुराहरु याद राख्नु पर्छ । जस्तै : सकेसम्म असाध्यै चिसो र असाध्यै तातो पानी नपिउँने । सकेसम्म मनतातो पानी पिउँने । बिहान उठ्ने बित्तिकै बासी मुखमा नै सकेसम्म ज्यादा मनतातो पानी पिउँने । पानी पिउँदा चिया पिए जस्तो गरेर थोरै थोरै पिउँने । दिनमा कम्तिमा ३ लिटर पानी पिउँने । सुत्नु भन्दा अगाडी मनतातो पानी पिउँने । यति कुरा लागू भए पछि शरिरमा लाग्ने धेरै रोगबाट मुक्ति पाउँछ ।
हाम्रो थालमा कुन खानेकुरालाई बढी महत्व दिने ? त्यो हाम्रै हातमा छ । त्यसैले जति खाना लिइन्छ, त्यसको अधिकतम् हिस्सा सागसब्जीको होस् । हरियो सागसब्जी प्रशस्तै सेवन गरौं । हरियो सागसब्जी फाइबरको राम्रो स्रोत हो । फाइबरले पाचन पद्धतीमा सहयोग गर्छ । जब पाचन यन्त्र चुस्त तथा तन्दुरुस्त हुन्छ, त्यसको प्रभाव समग्र शरीरमा रहन्छ । साथै, कृत्रिमरुपमा उत्पादन गरिएका बेमौसमी सागसब्जी सेवन नगर्ने । कृतिम ढंगले उत्पादन गरिएका सागसब्जी त्यती उपयोगी हुँदैनन् ।
जति भोक लागेको छ त्यो भन्दा कम खाने अनि समयको ख्याल गर्ने
भनिन्छ, स्वस्थ्य व्यक्तिको पेट उनको मुट्ठी बराबर हुन्छ । त्यस्तै स्वास्थ्यप्रति लापरवाही व्यक्तिको पेट फूटबल साइजको हुन्छ । सुन्दा हाँसउठ्दो लाग्न सक्छ । तर, यो सत्य कुरा हो । तपाईले ख्याल गर्नुभएको छरछैन, खानाप्रति आशक्ति हुने व्यक्तिहरु रोगी हुन्छन् । धेरै खाने, मिठोमसिनो खाने व्यक्तिलाई रोगले समात्छ ।
लामो आयु बाँच्ने एक बृद्धाले भनेकी थिइन्, ‘थोरै खाउँ, धेरै बाँच ।’ धेरै खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छैन । धेरै खाँदैमा शरीरलाई आवश्यक पोषण पुग्छ भन्नु भ्रम हो । बरु पेटभर खानेकुरा खाँदा त्यसले पाचन प्रक्रियामा असर गर्छ ।
यस्तै समयको वास्ता गरेर खाना खाने गर्नु पर्छ । बिहान हल्का खाजा खाने, दिउँसो खाना खाने र राती सुत्नु भन्दा कम्तिमा ३ घण्टा अगाडी खाना खाइसक्ने गर्ने हो भने रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
जति जति हामीलाई पैसाले पुग्दै जान्छ । जति हामी धेरै कमाई गर्न थाल्छौं । हामीलाई पैदल हिँड्न जाँगर चल्दैन । गाडी चढ्छौं । सब्जी किन्न जाँदा समेत गाडी नै चढ्ने बानी हुन्छ । हाम्रो सोचाई के पनि छ भने, पैदल हिँड्दा समय नष्ट हुन्छ । हामी गाडीको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने भएपनि हिँड्नका लागि समय छुट्याउनुपर्छ । स्वस्थ्य जीवनका लागि पैदल हिँड्नु एकदमै फाइदाजनक छ ।
अहिले शहरिया तन्नेरीहरु राती जागा रहन्छन् । धेरैजसो राती ११, १२ बजेसम्म बस्ने गर्छन् । कोही पढ्छन्, कोही टिभी हेर्छन्, कोही सामाजिक सञ्जालमा विताउँछन् । जबसम्म निन्द्रा लाग्दैन, ओछ्यानमा घुस्रिदैनन् । खासगरी पढ्ने उमेरका युवाहरुमा यस्तो बानी छ । राती अबेरसम्म नसुत्नु समस्या नै हो । किनभने स्वस्थ्य जीवनका लागि सुत्ने र उठ्ने तालिका नियमित हुनुपर्छ । राती ९ बजेदेखि १० बजेसम्म सुत्नुपर्छ । बिहान सूर्योदयअघि उठ्नुपर्छ ।
चिनीजन्य खानेकुरा नियन्त्रण गरौं
चिनीजन्य खानेकुरा स्वस्थ्यवर्द्धक मानिदैन । जबकी चिनी आफैमा स्वादिलो एवं मिठो हुन्छ । अर्को गाँठी कुरा, धेरैजस्तो खाद्यपदार्थमा चिनीको प्रयोग व्यापक रुपमा भएको हुन्छ । चाहे तयारी जुस होस् वा कोल्ड ड्रिक, कुनै मिठाई होस् वा रेष्टुरेन्टको परिकार । यस्ता खानेकुरामा चिनीको मात्रा अत्याधिक हुन्छ । तर, चिनीले स्वास्थ्यमा फाइदा गर्दैन ।
प्रविधिको जमाना छ । डिजिटल युगमा प्रविधिलाई पन्छाएर अघि बढ्न संभव छैन पनि । सजिलो र छरितो कार्यसम्पादनका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्नैपर्छ । हाम्रो परनिर्भरता यसरी बढ्दैछ कि त्यसले स्वास्थ्यमा गंभिर असर निम्त्याउँदैछ । अहिले हामी हरक्षण मोवाइल, ट्याबलेट, ल्यापटपमा विताउन थालेका छौं । यसले एकातिर हामीलाई शारीरिक रुपले निस्क्रिय बनाउँदैछ भने, अर्कोतिर त्यसबाट उत्पन्न विकिरणले स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउँदैछ । प्रविधिको सही प्रयोग गर्ने र फुर्सदको समयमा हिँडडुल गर्ने, टहल्ने गरौ ।
करियर, पैसा, परिवारको पछि लाग्दा लाग्दै हामी आफैलाई बिर्सन्छौं । कम्तिमा दिनमा एक घण्टा आफ्नो लागि छुट्याउन सकिन्छ । आफ्नो दिनचर्याको प्रारम्भ प्रातकालिन भ्रमण, व्यायामबाट गरौं । नियमित व्यायामले शरीर चुस्त, तन्दुरुस्त हुन्छ । रक्त संचार सही ढंगले हुन्छ । व्यायामलाई दिनचर्याकै एक हिस्सा बनाउन सके धेरै किसिमको रोगले संक्रमण गर्दैन ।
Topics #उपचार #खानपान #रोग
Don't Miss it टाइफाइड भनेको के हो ? यसको कारण, रोकथाम, घरेलु उपचार र मुख बार्नु पर्नेकुराहरु
Up Next शरीरले कुन रोगको संकेत कसरी गर्छ ? स्वास्थ्यका यी आधारभूत कुरालाई हामीले बुझ्नैपर्छ ।
नङ टोक्दा निम्त्याउँन सक्ने समस्याहरु, यस्ता छन्
शरीरमा केमिकलः यदि नङ पोलिस लगाउने महिलाको नङ टोक्ने बानी छ भने, पोलिसमा भएका विभिन्न केमिकल शरीरभित्र प्रवेश गर्ने खतरा…